अब के होला ? ची?नले यति धेरै सै,निक भारतको सी,मामा पठायो – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/अब के होला ? ची?नले यति धेरै सै,निक भारतको सी,मामा पठायो
अब के होला ? ची?नले यति धेरै सै,निक भारतको सी,मामा पठायो
एजेन्सी । भारतमा सीमा विवादले थप संकट निम्त्याएको छ । छिमेकी मुलुक चीनले अत्यन्तै शक्तिशाली सैनिकहरु हज्जारौको संख्यामा सीमा क्षेत्र पठाएपछि भारत आत्तिएको छ । उसलेपनि सैनिक शक्ति बढाएको त्यहाँका सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । यसले भारत–चीनबीच यु द्धको कालो बादल मडारिएको छ । दुवै देशका सञ्चारमाध्यमहरुपनि एक अर्काविरुद्ध खनिन थालेका छन् । सम्भावित तनावलाई दृष्टिगत गरी आन्तरिक तयारी समेत गर्न थालेका छन् ।
भारतीय सेनापति एम एम नरवाणेले चीनको नाम नलिई केही दिनअघि दिएको कडा अभिव्यक्तिले पनि तनाव बढेको संकेत गरेको थियो । सिमामा विवाद बढिरहँदा नरवाणेको भनाई बाहिर आएको हो । चीनको नाम नलिई नेपाललाई पनि भारतविरुद्ध उक्साएको आरोप लगाए । अहिले भारत र चीनबीच लदाखमा तनाव बढ्दै गएको छ । चीन र भारत दुवैले सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिएपछि सैन्य उपस्थिति बढाएका हुन् । चीनले लदाख नजिकै हवाई केन्द्र विस्तार गरिरहेको स्याटलाइज तस्बिरले देखाएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । सैन्य उपस्थिति पनि बढाएको उल्लेख छ ।
बढ्दो तनावलाई दृष्टिगत गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आपतकालिन सुरक्षा समितिको बैठक बोलाए । राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोभाल, रक्षा प्रमुख विपित रावतसहित स्थल, जल र हवाई गरी तीनैवटा सेनाका प्रमुखहरुसँग भेटेका छन् । रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले पनि सचिवहरुसँग आन्तरिक बैठक डाकेर सम्भावित चुनौतीबारे छलफल गरेको बुझिएको छ ।
यसैगरी, भारतले चीनसँग जोडिएको लदाखको विवादास्पद क्षेत्रसम्म विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गर्न थालेको भन्दै चिनियाँ पक्षले पनि शतर्कता अपनाएको छ । विवादास्पद क्षेत्रलाई भारले आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ । चीनले यसअघि नै उक्त क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गरिसकेको छ । भारतले अहिले त्यस क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासलाई तिव्र पारेको छ । जहाँ हजारौं सैनिक तैनाथ गरिएका छन् । लदाखको विवादास्पद उच्च क्षेत्रमा यी दुई देशको बढ्दो सैन्य उपस्थितिलाई गम्भीरताका साथ हेरिएको छ ।
भारतले लदाखमा चीनसँग जोडिएको सीमा क्षेत्रसम्म रणनीतिक सडकहरुको निर्माण योजना सारेको छ । सन् २०२२ सम्म ६१ वटा सडक निर्माणको लक्ष्य पुरा गर्ने उल्लेख छ । रणनीतिक रेल्वे लाइनहरुको योजना पनि सारेको छ । जसमध्ये ९ वटा चीनसँग र ५ वटा भारतसँगको सीमा नजिकसम्म हुनेछ । यसबाहेक हवाई केन्द्रहरु स्थापना गर्ने देखि स्तरोन्नतिसम्मको योजना रहेको टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ ।
यसैगरी विदेशी शक्तिको चलखेलले सिमा विवाद तनावग्रस्त बनेको चीनको भनाई छ । चिनियाँ प्रभावित गल्वान क्षेत्रबाट चीनले आफ्नो गतिविधि तीब्र र आ क्रमक पारेपछि भारतको केन्द्र दिल्लीसम्मको विषय बनेको थियो । चीनले तीन तर्फबाट लाइन अफ कन्ट्रोल पार गरी आफ्नो सैन्य गतिविधि तीब्र पारेको भारतीय सञ्चारमाध्यममा बारम्बार आइरहेको देखिन्छ । चीनले भने उक्त क्षेत्र आफ्नो भन्दै दाबी गर्दै आएको छ । यसै विवादका क्रममा भारतले आकास्मिक कन्फेरेन्स बैठक अप्रिल १३ देखि १८ सम्म तय गरेको थियो । लकडाउनका कारण भने बैठक स्थगित भएको थियो । बैठक हिजोदेखि सुरु भएको छ । बैठक मे २७ –२९ सम्म चल्ने जनाइएको छ । बैठकको मुख्य एजेन्डा नै सीमा सुरक्षा बलको विषयमा हुने जनाइएको छ ।
भारतका प्रधानमन्त्री मोदी, राजनाथ सिंह, अजित डोभाल लगायत प्रमुख व्यक्तिहरु कन्फेरेन्स बैठकमा सहभागी हुनेछन् । भारतले आफ्नो लदाख लगायत चीनसंग जोडिएका उत्तरी सिक्कीम, उत्तराखण्ड र अरुणाञ्चल प्रेदश सहितको सीमा क्षेत्रहरु सैन्य गतिविधिलाई तीब्र पारेको जनाइएको छ । यस विषलाई लिएर चीनले आपत्ति जनाउँदै आफ्नो क्षेत्रमा भारतले गरेको गतिविधि मान्य नहुने र आफ्नो सैन्य उपस्थितीसमेत तीब्र पारेको चिनियाँ सञ्चार माध्यममा उल्लेख छ ।
चीन र भारतले अफ्नो क्षेत्र दाबी गरिरहेको पूर्वी लदाखमा सिमांकन भने स्पष्ट नरहेको कारण दूवै देशहरुले पेट्रोलिङ तीव्र गरेको चिनियाँ सञ्चारमाध्ममा उल्लेख छ । चीन भारतीय पदाधिकारीबीच उच्च स्तरको वार्ता भइरहेको जनाइएको छ । यस विषयका केहि मुद्दाहरु मात्रा समाचारमा आइरहेको कारण सोहि विषयले सर्वसाधारणको ध्यान समेत केन्दित गरेको चिनियाँ सञ्चारमाध्यमा उल्लेख गरिएको छ । अहिले उत्पादित सीमा विवाद दिल्लीको योजनावद्व चाल रहेको चिनको यस प्रति आपत्ति रहेको छ । भारतलाई समेत उक्त क्षेत्र चीनकै रहेको स्पष्ट भएपनि गतिविधि तीब्र पारेकोमा चीनले पछाडि नहट्ने दाबी गरेको छ ।
भारतले आफ्नो तीब्रता कम नगरे बेजिङ दिल्लीको सम्बन्धमा असर पुग्ने र डोक्लाम स्ट्याण्डअफ सम्झौतामा समेत धक्का पुग्ने छ । यस गतिविधिमा विदेशी शक्तिले समेत हावा दिइरहेको उल्लेख गरिएको छ । चीनलाई अमेरिकाले बारम्बार कोरोनाका कारण आरोप प्रत्यारोप लगाइरहेको कारण दुवै देशबीच तवाको स्थिती रहेको छ । अमेरिकाले भारत र चीनको सम्बन्ध नरुचएको र बारम्बार तनाव सिर्जना गरिरहेको चिनियाँ सञ्चार माध्यममा उल्लेख छ । भारतले विस्तविक चीनलाई मनन गर्दै आफ्ना कदम चाल्नु पर्ने र चीन प्रतिको भारतीय द्रिष्टीकोण सुर्धानु पर्ने सझाव चीनले दिएको छ ।